(tonga teto avy amin'ny Baiboly dikanteny iombonana eto Madagasikara)
Ny Baiboly Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara, izay hafohezina amin'ny hoe Baiboly DIEM, dia fandikan-teny ny Baiboly ho amin'ny teny malagasy niarahan'ny mpandika teny malagasy avy amin'ny fiangonana vitsivitsy eto Madagasikara. Mikendry ny hananan'ny Kristiana miteny malagasy Baiboly tsy anavahana fiangonana ireo mpandika teny ireo no mikendry ny hahazoan'ny mpiteny malagasy ankehitriny ny tian'Andriamanitra ho lazaina. Ampiasaina indrindra io dikan-teny io amin'ny vavaka iraisam-pinoana ataon'ireo fiangonana miray ao amin'ny Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM). Tamin'ny taona 2003 no nanaovana printy voalohany ny Baiboly DIEM. Ny Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy no niandraikitra ny fanontana.
Mihevitra ny mpandika teny fa maro amin'ireo teny malagasy tranainy no efa tsy azon'ny mpamaky ankehitriny intsony ny heviny, noho izy tsy fandre andavanandro na koa efa niova hevitra, ka izany no isan'ny nanosika azy ireo hanao dikan-teny vaovao. Hahazoan'ny mpiteny malagasy ankehitriny ny tian'Andriamanitra ho lazaina izany. Izany no antony ampiasan'ny mpandika teny ny teny malagasy tenenina sy soratana amin'izao taonjato izao.
1.1.3 Ny Bokin'ny Olon-kendry
1.2.2 Ny Asan'ny Apostoly
2.1.2 Fanagasiana ny anaran'olona na anaran-toerana
3.2.1 Tsy fialana amin'ny mahazatra
Misy roa karazana ny Baiboly DIEM: ny iray natao ho an'ireo zatra nampiasa ny Baiboly protestanta (tsy ahitana boky deoterokanonika) ary ny iray natao ho an'ny mpamaky ny Baiboly katolika (ahitana boky deoterokanonika). Atolotra eto ny anaran'ny boky ao apmin'ny Baiboly DIEM araka ny fomba nanoratan'ny mpandika teny azy ireo.
Mitsinjara ho Bokin'ny Lalàna (na Pentateoka) sy Boky ara-tantara sy Bokin'ny Olon-kendry ary Bokin'ny Mpaminany ny Testamenta Taloha ao amin'ny Baiboly DIEM.
Ireto ny Bokin'ny Lalàna:
Ny Bokin'ny Olon-kendryHanova
Ireto ny Bokin'ny Olon-kendry:
Jôba, Salamo, Ohabolana, Kôheleta ary Tononkiran'i Salômôna
Vaovao Mahafaly araka an'i Matio,
Vaovao Mahafaly araka an'i Marka,
Vaovao Mahafaly araka an'i Lioka,
Vaovao Mahafaly araka an'i Jôhany.
Ny Asan'ny ApostolyHanova
Tokana ny Asan'ny Apostoly.
Taratasy avy amin'i Paoly ho an'ny Kristianina tany Rôma,
Taratasy voalohany avy amin'i Paoly ho an'ny Kristianina tany Kôrinto,
Taratasy faharoa avy amin'i Paoly ho an'ny Kristianina tany Kôrinto,
Taratasy avy amin'i Paoly ho an'ny Kristianina tany Galatia,
Taratasy avy amin'i Paoly ho an'ny Kristianina tany Efeso,
Taratasy avy amin'i Paoly ho an'ny Kristianina tany Filipy,
Taratasy avy amin'i Paoly ho an'ny Kristianina tany Kôlôsy,
Taratasy voalohany avy amin'i Paoly ho an'ny Kristianina tany Tesalônika,
Taratasy faharoa avy amin'i Paoly ho an'ny Kristianina tany Tesalônika,
Taratasy voalohany avy amin'i Paoly ho an'i Timôty,
Taratasy avy amin'i Paoly ho an'i Tito,
Taratasy avy amin'i Paoly ho an'i Filemôna
Taratasy ho an'ny Kristiana hebreo
Taratasy avy amin'i Jakôba,
Taratasy voalohany avy amin'i Petera,
Taratasy faharoa avy amin'i Petera,
Taratasy voalohany avy amin'i Jôhany,
Taratasy faharoa avy amin'i Jôhany,
Taratasy fahatelo avy amin'i Jôhany,
Taratasy avy amin'i Joda
Tokana ny Apôkalipsỳ, dia ny Apôkalipsỳ natolotra an'i Jôhany
Tsy voatery nisafidy ny iray amin'ny anaran'ny boky efa misy ao amin'ny Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy na amin'ny Baiboly katolika amin'ny teny malagasy ny mpandika teny fa indraindray dia nanao anarana vaovao izay heverin'ny mpandika teny fa manakaiky kokoa ny fanononana amin'ny teny grika na eo anelanelan'ny anarana protestanta sy katolika. Ohatra: ny Genesisy na Jenezy dia lasa Genesỳ. Ny anaram-boky milaza anarana mponina miafara amin'ny hoe -na ao amin'ny Baiboly protestanta dia miafara amin'ny -nina ao amin'io Baiboly io (ohatra: Romanina fa tsy Romana).
Fanagasiana ny anaran'olona na anaran-toeranaHanova
Ny anaran'olona na toerana dia natao tahaka izany koa, nampanakaikezina ny teny grika na hebreo. Misy fahasamihafany amin'ny Baiboly protestanta malagasy sy amin'ny Baiboly katolika malagasy tranainy izy raha ny amin'ny anaran'olona sy ny anaran-tany.
Mampiavaka azy ny fanatsofohana ny litera "h" amin'ny anarana izay efa mahazatra ka tsy nisy an'io litera io. Ny hoe Isaka lasa hoe Itsehàka (hebreo: יצחק / Iishḥâk; grika: Ισαάκ/ Isaak). Hita koa ny hoe Kanahana fa tsy Kanana na Kanaana (hebreo: כְּנָעַן‬ / Kənâ‘an; grika: Χαναάν / Khanaan).
Ny anarana hoe Jehovah na Iahve dia nosoloana ny hoe TOMPO (atao sora-baventy) ka ny fomban'ny Baiboly jiosy amin'ny teny grika (Septoaginta na Septanta) izany, izay nanolo ny anaran' Andriamanitra amin'ny litera hebreo hoe יהוה‬ / IHVH na YHWH ho Kύριος / kúrios (midika hoe "Tompo") fotsiny amin'ny teny grika. Ao amin'ny Baiboly jiosy amin'ny teny hebreo (ny lahatsoratra masoretika) anefa io anarana io dia tsy nesorina fa voasoratra ihany nefa tsy tononina.
Ankoatry ny maha dikan-teny vaovao azy dia dikan-teny iombonana ny DIEM ka natao indrindra hanamafisana ny fiombonan'ny Kristiana amin'ny fampiasana azy amin'ny fivavahana iraisam-pinoana karakarain'ny FFKM, ka betsaka ny mpitondra fivavahana mampiasa azy amin'izany. Maro koa ny mamporisika ny famakiana azy noho ny teny malagasy mora azo ao amin'io Baiboly io.
Tsy fialana amin'ny mahazatraHanova
Na dia natao hovakina amin'ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana aza ny DIEM dia maro ny mpitondra fivavahana mampiasa ny Baibolin'ny fiangonany amin'ny fotoana anaovana fivavahana iraisam-pinoana. Tsy vitsy ihany koa ny tsy mahazoazo ny dikan-teny noho ny fahitany voambolana sy anaran'olona na anaran-tanàna na anaran-javatra hafa tsy fahitany ao amin'ny Baiboly mahazatra azy. Noho izany dia misy ny mpino protestanta izay mihevitra fa tsy mifankaiza amin'ny Baiboly katolika ilay izy, ary tsy vitsy koa ny mpino katolika izay mihevitra fa tsy mifankaiza amin'ny Baiboly protestanta io boky io.
Amin'ny Kristiana sasany dia sady tsy an'ny Protestanta no tsy an'ny Katolika ny DIEM satria tsy nihazona teny sasany efa niombonana na efa misy ao amin'ny Baiboly protestanta na ao amin'ny Baiboly katolika nisy talohan'ny Baiboly DIEM ny mpandika teny.
Azo raisina ohatra amin'izany ny fanoratana ny anarana hoe Jôhany izay sady tsy protestanta (Jaona) no tsy katolika (Joany), ny anaran'ny boky hoe Genesý (fa tsy Genesisy na Jenezy), Itsehàka (fa tsy Isaka), Kanahana (fa tsy Kanana na Kanaana), sy ny maro hafa koa.
Ny mpino protestanta sasany dia tsy mampiasa io boky io noho ny tsy fahitany intsony ny anarana hoe Jehovah ao izay midika aminy fa tsy fampananana anarana an'Andrimanitra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Baiboly_Dikanteny_Iombonana_Eto_Madagasikara&oldid=980200"
Dernière modification le 27 Janoary 2020, à 19:13
Voaova farany tamin'ny 27 Janoary 2020 amin'ny 19:13 ity pejy ity.